I-Social Web Suite: Ipulatifomu Yokuphathwa Kwemidiya Yezenhlalo Eyakhelwe Abashicileli beWordPress | Martech Zone
Uma inkampani yakho ishicilela futhi ingasebenzisi imithombo yezokuxhumana ngempumelelo ukukhuthaza okuqukethwe, ulahlekelwa ngempela ithrafikhi encane. Futhi ... ukuthola imiphumela engcono, okuthunyelwe ngakunye kungasebenzisa ukwenza okuthile ngokususelwa kungxenyekazi oyisebenzisayo.
Njengamanje, kunezinketho ezimbalwa zokushicilelwa okuzenzakalelayo kusuka ku- WordPress isayithi:
Iningi lamapulatifomu wokushicilela ezokuxhumana nabantu anesici lapho ongashicilela khona kusuka kokuphakelayo kwe-RSS.
Ngokuzithandela, ungasebenzisa ifayela le- ipulatifomu yokuphakelayo okushicilela ngokuzenzakalela lapho okuphakelayo kwakho kubuyekezwa, nakho.
Inkampani yeWordPress 'nayo inikela Jetpack enenketho Yomphakathi yokuphusha okuthunyelwe kwakho eziteshini zakho zenhlalo.
Esimweni ngasinye, ungeza ama-akhawunti wakho wezokuxhumana futhi uma okuphakelayo kwakho sekuvuselelwe, umyalezo uhlanganisiwe bese ushicilela isiteshi esifanele. Zisebenza kahle kakhulu, kepha kunomkhawulo omkhulu wazo zonke.
Lapho i- isihloko seposi ingahle isetshenziselwe ukusesha, a okuthunyelwe kwezokuxhumana ungahle ufune ukuheha kakhulu futhi usebenzise ama-hashtag ukushayela ukunakwa okwengeziwe. Ngenxa yalokho, iningi labashicileli abafuna ukusebenzisa ngokuphelele imithombo yezokuxhumana bathatha futhi baphathe ngesandla izibuyekezo zabo zemidiya yokuxhumana. Ngenkathi kuthatha imizuzu embalwa eyengeziwe ukuhlela nokushicilela kungxenyekazi ngayinye, imiphumela ingaba ngcono kakhulu kunokuvele ukhiphe okuphakelayo kwakho.
I-Social Web Suite
UTina Todorovic noDejan Markovic bakhe i-plugin yeWordPress ehlanganiswe neBuffer. Kepha njengoba beqala ukuthola izicelo zesici eziningi nezengeziwe uBuffer angenazo, banqume ukwakha ipulatifomu yabo - I-Social Web Suite. ISocial Web Suite ifaka konke okudingwa yipulatifomu yokuphathwa kwezokuxhumana ngokuhlanganiswa okuqine kakhulu neWordPress. Ezinye zalezi zici zifaka:
Amandla wokungahlanganisi okuthunyelwe kuphela, kepha amakhasi, izigaba, namathegi futhi!
Okuthunyelwe kwakho kushicilelwa ngokushesha kuma-akhawunti wezenhlalo ngokushesha nje lapho kushicilelwa ku-WordPress bese kudluliselwa emuva kwesigaba sabo ukuze baphinde babelwe kabusha kamuva!
Ukuzenzakalela okulula okuguqula isigaba noma ithegi yokuthunyelwe ibe ngama-hashtag kokuthunyelwe kwakho kwemidiya yokuxhumana.
Ama-URL womkhankaso we-Google Analytics Campus anokuguquguquka kwe-UTM amakwe ngokuzenzakalela.
Esikhundleni sokushicilela khona manjalo ezinkundleni zokuxhumana, okuthunyelwe kufakwa kulayini isikhathi esihle kakhulu sokushicilela.
Okuthunyelwe kwe-evergreen nakho kungashicilelwa.
Ikhalenda eligcwele lokushicilela likunikeza ngombono ocacile wokuthi yikuphi ukubuyekezwa okuzoshicilelwa.
Kunokusekelwa okubanzi kwawo wonke amapulatifomu amakhulu ezokuxhumana nabantu ngeSocial Web Suite. Ungashicilela ku-Facebook Amakhasi noma Amaqembu, ama-Akhawunti we-Instagram noma ama-Instagram, i-Twitter, ama-LinkedIn Profiles noma amakhasi. Futhi, uma ungathanda ukuletha amavidiyo wakho we-Youtube noma okunye okuphakelayo kwe-RSS, ungakwenza lokho futhi.
ISocial Web Suite iyithuluzi elinamandla kunawo wonke lokuhlela umphakathi engake ngalisebenzisa. Njengamanje ngisebenzisa amathuluzi amaningi ukufeza okwenziwa yiSocial Web Suite, futhi ngijabule kakhulu ukuthi iSocial Web Suite ithathe indawo yayo! ISocial Web Suite ishintsha umdlalo wama-blogger namabhizinisi amancane futhi izokwenza ukuhlela okuthunyelwe kube lula kakhulu!
Ngeplatifomu ephelele yokuphathwa kwemidiya yezenhlalo kanjena, amanani entengo ayabiza impela. Ungaqala nge-akhawunti eyodwa yomsebenzisi eshicilela kuma-akhawunti wezokuxhumana we-5 bese uqhubekela phambili ku-akhawunti yebhizinisi evumela abasebenzisi be-3 kanye nama-akhawunti wezokuxhumana we-40.
Qala Isivivinyo Sezinsuku eziyi-14 seSocial Web Suite
Ukudalulwa: Ngingumuntu ohlangene we I-Social Web Suite.
Tags: FacebookIqembu le-FacebookIphrofayela ye-FacebookinstagramIphrofayili yebhizinisi le-instagramLinkedInamakhasi we-linkedinamaphrofayli we-linkedinrss ezinkundleni zokuxhumanaikhalenda yezokuxhumanaukuthumela ezinkundleni zokuxhumanaukushicilela ezinkundleni zokuxhumanainkundla yokushicilela izinkundla zokuxhumanaukuhlela ezokuxhumindawo yokuxhumana nabantuTwitterWordPressplugin wordpressI-YouTube ezinkundleni zokuxhumana